Josefa anodudzira hope dzevasungwa (1-19)
“Kududzira ndekwaMwari” (8)
Mabiko ekupemberera zuva rekuzvarwa kwaFarao (20-23)
40 Izvi zvaitika, mukuru wevadiri+ wamambo weIjipiti nemukuru wevabiki vakatadzira ishe wavo, mambo weIjipiti. 2 Saka Farao akatsamwira vashandi vake vaviri, mukuru wevadiri nemukuru wevabiki,+ 3 uye akavaisa mujeri reimba yemukuru wevarindi,+ maiva naJosefa ari musungwa.+ 4 Mukuru wevarindi akabva aita kuti Josefa ave navo uye kuti avashandire,+ uye vakaramba vari mujeri kwemazuva. 5 Mudiri nemubiki vamambo weIjipiti, avo vakanga vakavharirwa mujeri, vakarota hope usiku humwe chete, uye hope dzemumwe nemumwe dzaiva nekududzirwa kwadzo. 6 Mangwana acho mangwanani, Josefa paakapinda akaona kuti vakanga vakasuruvara. 7 Saka akabvunza vashandi vaFarao vaaiva navo mujeri reimba yatenzi wake kuti: “Ko makasuruvareiko nhasi?” 8 Vakabva vati kwaari: “Tarota hope, asi hatina mududziri.” Josefa akati kwavari: “Handiti kududzira ndekwaMwari here?+ Ndiudzei hope dzacho.” 9 Saka mukuru wevadiri akarondedzera hope dzake kuna Josefa achiti: “Ndarota pamberi pangu paine muzambiringa. 10 Pamuzambiringa wacho panga paine tumapazi tutatu, uye pawanga uchitungira, wabuda maruva, masumbu emazambiringa acho achibva aibva. 11 Uye ndanga ndakabata kapu yaFarao, ndikatora mazambiringa acho ndikaasvinira mukapu yaFarao. Ndabva ndaisa kapu yacho muruoko rwaFarao.” 12 Josefa akabva ati kwaari: “Hope dzacho dzinodudzirwa seizvi: Tumapazi tutatu tunomirira mazuva matatu. 13 Mazuva matatu kubva nhasi, Farao achakubudisa* okudzorera pabasa rako,+ uye uchaisa kapu yaFarao muruoko rwake, sezvawaiita pawaiva mudiri wake.+ 14 Asi wozondiyeukawo kana zvakufambira zvakanaka. Undiitirewo mutsa nekuudza Farao nezvangu kuti andibudise muno. 15 Chiripo ndechekuti ndakaita zvekubiwa kunyika yevaHebheru,+ uye kuno kwandiri handina mhosva yandakapara yekuti vandiise mujeri.”*+ 16 Mukuru wevabiki paakaona kuti zvakanga zvadudzirwa naJosefa zvaifadza, akabva ati kwaari: “Iniwo ndarota ndakatsiga tswanda nhatu dzechingwa chichena, 17 uye mutswanda yepamusoro manga muine zvingwa zvemhando dzakasiyana-siyana zvaFarao, uye panga paine shiri dzanga dzichidya zvanga zviri mutswanda yacho yanga iri pamusoro.” 18 Josefa akabva apindura kuti, “Hope dzacho dzinodudzirwa seizvi: Tswanda nhatu dzinomirira mazuva matatu. 19 Mazuva matatu kubva nhasi, Farao achakucheka musoro,* okusungirira padanda, uye shiri dzichadya nyama yako.”+ 20 Zvino zuva rechitatu raiva zuva rekuberekwa kwaFarao,+ uye akaitira vashandi vake vese mabiko ndokubudisa mukuru* wevadiri nemukuru wevabiki vashandi vake vachiona. 21 Uye akadzorera mukuru wevadiri pabasa rake rekuva mudiri, akaramba achiisa kapu muruoko rwaFarao. 22 Asi akasungirira mukuru wevabiki, sezvavakanga vadudzirwa naJosefa.+ 23 Asi mukuru wevadiri haana kuyeuka Josefa; akabva atokanganwa nezvake.+
^ ChiHeb., “achakusimudza musoro.”
^ ChiHeb., “achasimudza musoro wako kubva pauri.”
^ ChiHeb., “ndokusimudza musoro wemukuru.”